TeamKeeper: Ataovy maoderina ny fihazonana talenta miaraka amin'ny Analytics Analytics | Martech Zone
TeamKeeper: Ataovy maoderina ny fihazonana talenta miaraka amin'ny Analytics Analytics
Talata, Martsa 28, 2017 Douglas Karr
Ny karama vaovao dia nampalahelo ny tafatafa, saingy tsy nanao araka ny nampoizina. Ny mpikambana ao amin'ny ekipa dia tsy mamono quota satria tsy mahazo coaching mety. Ireo mpivarotra manan-talenta dia mandao ny orinasa satria tsy mahatsapa ho mirotsaka amin'ny asa izy ireo.
Ny mpitantana ny varotra dia mitana andraikitra lehibe amin'ny sehatra rehetra etsy ambony. Ny mpitantana matanjaka dia lakilen'ny fahombiazan'ny fikambanana, saingy ihany 12% amin'ny mpiasa amerikana Manaiky tanteraka ny mpitantana azy ireo manampy azy ireo hametraka laharam-pahamehana amin'ny asa - ary ireo 12% dia faly kokoa amin'ny asany noho ny hafa.
Ireo tolona ireo no aingam-panahy ho an'ny TeamKeeper, sehatra fihazonana talenta vaovao izay mampiasa tahiry mba hanomezana tolo-kevitra manokana momba ny fahitana mpiasa, fampivelarana ary fampandraisana andraikitra.
TeamKeeper dia mandray ny fomba fitantanana data talenta amin'ny fitantanana statistika amin'ny fomba hentitra kokoa, hahazoana antoka fa ny fitantanana dia tsy fomba iray mitovy habe amin'ny rehetra. Ny teknika sy ny antony manosika an'i Bonnie dia samy hafa be amin'i Jeff, ary ny fahitana nomen'ny TeamKeeper dia mamela ny mpitantana hiara-miasa amin'izy ireo tsirairay avy mba hahazoany tombony betsaka amin'ny mpiasa ao aminy. Ny tomban'ezaka voaorina ao amin'ny TeamKeeper, ny fametrahana tanjona, ny fitaovana fampidirana ary ny laharam-pahamehana dia natao hanatsara ny mpitantana, noho izany dia tsy ho fantany fotsiny hoe iza ary rahoviana no hanao coach, fa ahoana.
Saingy ny fitaovana dia tsy manampy amin'ny fitantanana talenta efa misy fotsiny; io koa dia manampy amin'ny fahitana talenta vaovao izay mety tsara amin'ny anjara andraikitra. Ny tombana manokana ataon'ny TeamKeeper dia maminavina ny fahombiazan'ny kandidà amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny toetra amam-panahin'izy ireo amin'ireo takiana mba hanao asa manokana. Ny mpivarotra dia afaka mihetsika tsara amin'ny resadresaka (hainy ny mivarotra ny tenany!) Saingy mety ho tsapan'ny mpitantana iray fa tara loatra fa tena tsy mety amin'ilay asa akory ilay olona.
Raha jerena fa mitentina eo ny vidiny 20% ny karaman'ny mpiasa iray hanoloana an'io olona io, ary 52 andro ho an'ny orinasa iray hameno ny toerana misokatra, ny fandraisana fanapahan-kevitra tsara momba ny fandraisana andraikitra voalohany, dia manakiana amin'ny fahitana fahombiazana sy tombom-barotra. TeamKeeper dia miasa ho toy ny fitaovana iray feno - manomboka amin'ny fahitana ka hatramin'ny fahitana talenta ka hatramin'ny fampianarana sy ny fampandrosoana. Ny fandraisana talenta ambony, ary koa ny fampiofanana sy ny fandraisana mpikambana ao amin'ny ekipa efa misy mifanaraka amin'ny filany tsy manam-paharoa, dia hanampy amin'ny fanafoanana ny fivezivezena.
Manampy ny fandrosoan'ny mpiasa maharitra ny angon-drakitra, nefa manome sary fakana fotoana tena izy mba hanomezana "pulse" an'ireo mpitantana ny ekipany. Ny fanadihadihana namboarina nataon'ny TeamKeeper sy ny fitaovana fanamarihana isan-kerinandro dia manamora ny fananganana kolontsainan'ny fandraisana andraikitra, mitazona ny mpiasa hiroso amin'ny fanatsarana ny fitondran-tena amin'ny ekipa. Miaramila miaraka amin'ity angon-drakitra azo ampiharina ity, omena fahefana ireo mpitantana hihazona talenta ambony, hitombo ny vidin'ny varotra ary hampitombo ny vola miditra amin'ny orinasa amin'ny ankapobeny.
Ireo fomba fijery ireo dia mety hampiharihary manokana. Ohatra, ny mpitantana dia mety tsy hahatsapa fa ny mpiasa mangina na introverted dia maniry ny hahatratra ny toeran'ny mpitantana, na hampivelatra fahaiza-manao manokana. Tsy ny TeamKeeper ihany no hanaisotra ity fampahalalana ity, fa hanome ny paikadim-pitantanana namboarina mba hananana tombony betsaka amin'ireo mpikambana ao amin'ny ekipa ireo.
Ny fahaizan'ny talenta an-tsokosoko an-tsokosoko dia manome fivarotana tokana izay manampy ny mpitantana varotra amin'ny asa manokana, ao anatin'izany:
Trano fanoratana: Ny fanombanana manokana dia maminavina ny fahombiazan'ny mpifaninana amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny toetrany amin'ireo izay takiana mba hanao asa manokana.
Coaching: Ny tomban'ezaka ao anaty an'ny TeamKeeper, ny fametrahana tanjona, ny fitaovana fampidirana ary ny laharam-pahamehana dia manome sakafo ny Planin'ilay Mpampianatra, ka tsy ho fantatry ny mpitantana fotsiny hoe iza ary rahoviana no hanao coach, fa ahoana.
Fananganana fiaraha-miasa sy kolontsaina: Ny fanadihadiana natao namboarina sy ny fitaovana fanamarihana isan-kerinandro dia manamora ny fananganana kolontsain'ny fandraisana andraikitra, mitazona ny mpiasa hiroso amin'ny fanatsarana ny toe-tsaina amin'ny ekipa.
Fametrahana tanjona ary hanaraka: Ny fitaovana fametrahana tanjona dia manampy ny mpitantana hametraka tanjona voafaritra, azo refesina ary azo alaina amin'ny alàlan'ny fampiasana tanjona SMART na OKR (tanjona sy valiny lehibe). Ny mailaka fanaraha-maso mandeha ho azy dia mandoto ireo solo-tsolika momba ny fandrosoany ary manavao ny dashboard TeamKeeper.
Fitantanana varotra voatarika: Soso-kevitra lisitra isan'andro tokony hatao, paikadim-pitantanana ho an'ny mpikambana ao amin'ny ekipa ary torohevitra momba ny fitarihana isan'andro dia sasany amin'ireo fomba nanamoran'ny TeamKeeper ho mora kokoa na dia ireo mpitantana maitso aza mba hahomby kokoa.
Integration: TeamKeeper dia afaka mifangaro amin'ny ankamaroan'ny CRM mifototra amin'ny rahona, rafitra HR ary rafi-pitantanana fianarana. Izy io koa dia manampy amin'ny fanapahana ny silo misy eo amin'ny HR sy ny fitantanana hahafantarana ireo kandidà hahomby ary hampitombo ny fitazonana ny mpiasa.
Ny fehiny dia ny fihainoana ireo mpiasa sy ny fanaingoana ny paikady fitantanana azy ireo dia afaka mampitombo ny vola miditra, ny tombom-barotra ary ny fitondran-tena ny fikambanana raha mampihena ny tantara an-tsehatra any am-piasana.
Tags: toeranatrano fanoratanafanombanana ny varotracoaching varotrakolontsaina fivarotanaFanamafisana ny varotrafifampiraharahana amin'ny varotravarotra manarakafametrahana tanjona amin'ny varotratanjon'ny varotrafiantraikany amin'ny varotrafitantanana varotrafilaharan'ny varotravarotraekipa mpivarotra varotrampiandry ekipa
Fampidirana ny Factory Creative: Nahazo mora kokoa ny doka finday
Manakana ny aretin'andoha: Maninona no manampy amin'ny fandrefesana ny ROI ny endrika an-tserasera?